भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाबै ओलीले दिल्लीलाई दिए ‘सरप्राइज’, पाकिस्तानमा मच्यो तहल्का ! – Sanghiya Online
Posted on : April 5, 2018 - No Comment
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजकीय भ्रमणका लागि भारत जाने तयारी भइरहेका बेला पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट अफ्गानिस्तानको जिम्मेवारी हेर्ने अधिकार कटौती भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार बुधबारदेखि लागू हुने गरेर पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावसको अधिकार कटौती गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमणमा जानु एकदिन अगाडि नयाँदिल्ली खुसी हुने गरेर गरेको यो निर्णयले ठूलो हलचल उत्पन्न गराइदिएको छ ।
भारतले पनि पाकिस्तानलाई एक्लाउनका लागि पास्कितानस्थित नेपाली राजदूतावासले अफ्गानिस्तान हेर्ने गरेर पाएको अधिकार कटौती होस् भनेर नेपाली पक्षसँग कुरा राख्दै आएको थियो । ओलीले आफू भ्रमणमा जानु अगाडि भारतीय पक्षलाई आकर्षित गर्ने गरेर पाकिस्तानविरुद्ध हुने गरेर निर्णय गरेका छन् ।
पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासले अफ्गानिस्तानसम्बन्धी मामिला हेर्दै आएकोमा बिहीबारदेखि भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले अफ्गानिस्तानको जिम्मेवारी हेर्नेछ ।
स्रोतका अनुसार पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाबाट एक्लाउनका लागि पनि नेपालीको निर्णयले ठूलो महत्व हुने भनेर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार सम्प्रेण गरेका छन् । नेपाल सरकारको यो निर्णयले पाकिस्तानलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।
जनयुद्धका नायकलाइ ओलीले जरै देखि सिद्धयाए, दम्भले सिद्धिएको प्रचण्डको यि गलत निर्णयहरु
आज राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु
नेकपा सरकारको सङ्घीयता असफल बनाउने खेल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा फेल- उपेन्द्र
ओलीले गरे फेरि यस्ता कुरा निर्वाचनमा एकछत्र विजय गरेका कारण १ नं प्रदेशको राजधानी धनकुटा बनाउछु
मात्रिका यादवको आक्रोस, फेरि लिए एक्शन, किन गरे महानिर्देशकलाई नै सरुवा ?
विप्लवसहित चार पार्टीले घोषणा गरे आन्दोलनका कडा कार्यक्रम (विज्ञप्ति सहित)